Mashruuca Maktabadda Wareegta | Sahan radio
Mashruuca Maktabadda Wareegta
Bishii Oktoobar ee tagtay waxay hey’adda Somali Family Service, oo kaashanaysa hey’adda Relief International bilowday mashruuc lagu magac daray “Mobile Liberary” ama afsoomaali ahaan noqon kara mashruuca “Maktabadda Wareegta.” Hadafka mashruucan, oo ay door weyn ka ciyaarayso wasaaradda Waxbarashada ee Puntland, waxa weeye in la abuuro bay’ad waxbarasho iyo akhrinta buugta, iyadoo loo sii marayo ardayda. Ujeeddo kale ee loo unkumay mashruucan wuxuu si gaar ah u quseeyaa tayeenta waxbarashada gabdhaha yaryar.
Sooyaal ahaan, bulshada Soomaalida waxaa lagu tilmaami jiray, weligana lagu sheegaa dad hadla (oral people), oo aan ku dhiirran qoraalka, waxna aan sidaas u sii akhrin. Weli waxaa muuqata, inkastoo lagu jiro xilli casri ah, in tilmaantaas la baxshay ay wax ka jiri karaan, balse waa arrin wax laga beddeli karo. Waxaana bilowday ifafaalayaal muujinaya in ay wax iska beddelayaan fikradaas la soo carrabaabay. Sidaas darteed, waxaaba la oran karaa mashruuca maktabadda wareegta ama maktabadda guur-guurta (Mobile Library) wuxuu abuuri karaa in dadka Soomaalida, gaar ahaan carruurta iyo dhallinyarada u horseedo barashada dhaqanka wax akhrinta.
Mashruucan waxaa tixgelin gaar ah lagu siinayaa gabdhahha yarar ama dhallinyarada ah; iyadoo ila gaar ah lagu eegayo, weliba marka ay tahay barashada wax akhriska iyo ku ababbinta dhaqanka wax-akhrinta.
Hey’adda SFS (Somali Family Service) oo hormood ka ah hirgelinta mashruucan waxay booqatay, islamarkaana ay buug ugu deeqday ilaa 16 (lix iyo toban) dugsi ama iskuul oo ku yaala magaalada Garoowe iyo nawaaxigeeeda.
Subax kasta waxaa rugta dhexe ay hey’adda SFS ka dhaqaaqa baska maktabada wareegta (mobile library), oo ku rararan ama sida boqolaal buug ah; waxaana buugtaas si ku-meel-gaar ah loogu deeqaa ardayda dugsiyadda. Ka dibna, waxaa ardayda la siiyaa wqti ay ku akhristaan buugta loo qaybiyey, iyagoo la kaashanaya macallimiintooda. Laba saacadood ka bacdi, waxay ardayda, shaqaale ka socda maktabadda guur-guurta iyo macallimiinta ardayda ay ka doodaan, isla falanqeeyaan sheekada la akhriyey ama cutub ka mid ah buugga oo ay ardayda akhrisay.
Waxaa halkaas ka dhasha dood qurux badan, oo keenta in laga dhandhansan karo afkaarta iyo dooda ardayda yaryar inay u baahanyihiin in lagu ababbiyo dhaqan wax akhris buug. Waxa kale oo ka soo baxaya isbeddelka yare ee ku dhacaya hab dhaqanka ardayda muddo yar oo ay buugta akhristeen
Mashruucan oo ah barashada dhaqanka wax akhrinta waxaa lagu tijaabinayaa ardayda dugsiyadda hoose, dhexe iyo sare; waxaana ilaa iyo ka muuqda natiijo wax-ku-ool ah, oo ay xataa ardayda qaarkood ku muujinayaan dareenkooda
Halkan Hoose Waxaa Ku Taxan Dugsiyadda La Booqday
Liiska Dugsiyadda Mobile Library ee Magaalada Garoowe
Darwiish Primary School
Mohamud Aw-Osman Primary School
Waberi Primary School
Samawade Primary School
Daawad International Primary School
Barwaqo Primary School
New Waaberi Primary School
Kaalo Primary School
Al-waxa Secondary School
AL-xikma Primary School
Israac Primary School
Shabeele Primary School
Jawle Primary School
New Jawle Primary School
Wixii faahfaahin ah kala soo xiriir emailkan: